Ku dhawaaqista natiijada kursiga HOP067 oo la hakiyay | KEYDMEDIA ONLINE
Guddiga Xallinta Khilaafaaadka, ayaa guddoonka Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka Heer Federal (GHDHF) iyo Guddiga Maamulka Doorashada ee Galmudug (GMDG), ku amray in la hakiyo ku dhawaaqista natiijada kursiga HOP067.
MUQDISHO, Soomaaliya – Guddiga Xallinta Khilaafaaadka Doorashada Dadban (GXKHDD) ee 2020/2021, ayaa ku dhawaaqay kuna war-galiyay Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka Heer Federal (GHDHF) in dacwad laga keenay kursiga sumaddiisu tahay HOP067, kaas o dhawaan Dhuusamareeb loogu boobay eedeysane Yaasiin Farey.
Sida ku cad waraaqda ka soo baxday GXKHDD, waxaa dacwada natiijada kursiga soo gudbiyay, Murashax, Axmed Cabdikariin Cali iyo Nabaddoon Cali Xassan Cali (Cali Jeesto) oo ah saxiixaha rasmiga ah ee kursiga, wuxuuna Guddiga Xallinta Khilaafaaadka, amray in la hakiyo ku dhawaaqista natiijada doorshada kursiga.
“GXKHDD, asagoo gudanaaya waajibaadkiisa shaqo ee loo igmadey wuxuu ku wargalinayaa Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka, in la hakiyo ku dhawaaqista natijijada kursi lumber HOP#067 laga bilaabo 28/11/2021 inta GXKHDD uu go'aan ka gaarayo dacwada laga soo gubdiyay kursigaas”. Ayaa lagu yiri, warka ka soo baxay GXKHDD.
Guddigu, wuxuu sheegay in baarintaanka cadaymaha, dhagaysiga dhinacyada ay khusayso dacwadu, iyo ga'aan ka gaarista dacwada uu ku dhamaystiri doono muddo todobo (7) maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa 28/11/2021 Waxayna go'aanka ugu gudbin doonaan soo dacwoodayaasha iyo dhamaan dhinacyada ay Khuseyso muddo afar iyo labaatan saacadood (24) gudahood ah oo ka bilaabanaya marka go'aanka la gaaro.
“GXKHDD wuxuu ku wargalinyaa Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka ee Heer Federaal (GHDHF) iyo Guddiga Maamulka Doorashooyinka ee Galmudug in ay si dhaw ula shaqeeyaan xubnaha GXKHDD ee dacwadan gacanta ku haya si loo helo xog dhameystirsan islamarkaana dhawraan waqtiyada dhagaysiga dacwada ee lagu qeexay habraacyadii ka soo baxay Golaha Wadatashiga Qaranka”. Ayaalagu sii daray warka GXKHDD
Kusiga HOP067, Cabdullahi Cali Axmed [CADDOW CALI GEES], ayaa matalayay Baarlamaankii 10-aad, waxaana leh, beesha Waceysle Abgaal, Hawiye, waxaana sanadkaan baratamayaashiisa ka mid ah Axmed Cabdikariin, oo ganacsade ah iyo Agaasimahii hore ee hay’adda sirdoonka iyo nabad sugida qaranka, Cabdiraxmaan Maxamuud Turyare.
Qoorqoor, oo Fahad iyo Farmaajo u boobaya kuraasta baarlamaanka 11-aad ee taalla Galmudug, ayaa kursiga u xiray eedeysane Yaasiin Farey, kaas oo ka mid ah, shaqsiyaadka ku eedeysan khaarijinta Ikraan Tahliil.
Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashooyinka Dadban ayaa dhawaan xalaaleeyay doorashadii uu kursiga HOP239, ku boobay Ra’iisul Wasaare ku Xigeynka dalka Mahdi Maxamed Guuleed, kaas oo u cabsho ka muujiyay Xildhibaan Xuseen Carab Ciise.